Jabuuti oo Eritrea la Aadeysa Maxkamadda Caalamiga ah ICJ | SAHAN ONLINE
JABUUTI – Jabuuti ayaa ka codsatay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iney kabtaageeraan sidii xal looga gaari lahaa muran xuduudeedka kala dhaxeeya dalka Eritrea iyo iney dacwo ka furtaan maxkamadda caalamiga ah ee ICJ,haddii lagu guuldaraysto dhexdhrlexaadinta iyo wadahadalka.
Safiirka Jabuuti ee Qaramada Midoobey Ambassador Maxamed Saciid Ducaale ayaa sheegay in dalkiisu doonayo xal kama dambeys ah loo helo khilaafka xadka ee kala dhaxeeya Eritrea iyo in lagu kala baxo sharciga dowliga ah.
…” Djibouti waxaa ay golahu ugu yeertay iyada oo kaashaneysa taageerada xogheyaha guud in labada dhinac ay muranka ku xaliyaan si nabad ah, oo cid kale ay dhex-dhexaadiso sida maxkamadda cadilga adduunka ee ICJ” sidaasi waxaa sheegay Ducaale.
Qodobka 33 aad dastuurka QM sida uu qorayo waxa uu ogalaanayaa in dalalka muranka ka dhaxeeyo ay xal iyo qaab nabadeed u raadin karaan xuquuqdooda.
Jabuuti arrimaha ay ku doodeyso waxaa milkiyadda Jasiiradda Doumeira iyo 13 maxbuus oo weli lagu la’yahay gacanta Eritrea.